Junior Sales & Marketing Executive | Myanmar ComBiz Group ﻿
12.11.2018, Full time , Investment
•	လူမှုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူ ဦးစားပေးမည်။
•	အသက် (၂၅)နှစ်မှ (၃၀)နှစ် အတွင်း ဖြစ်ရပါမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်နှင့် အထက်၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံရှိသူ၊
•	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ၊ computer Microsoft app/ Typing ကျွမ်းကျင်သူ၊
•	Office Admin ကိစ္စများနှင့် Purchasing ကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်သူ၊
Job Function: Junior Sales & Marketing Executive
24 Days, Full time , 800 000 Ks, Investment
Completes engineering projects by organizing and controlling project elements. Develops project objectives by reviewing project proposals and plans; conferring with management. Determines project responsibilities by identifying project phases and elements; assigning personnel to phases and elements; reviewing bids from contractors. Determines project specifications by studying product design, customer requirements, and performance standards; completing technical studies; preparing cost estimates. Confirms product performance ...
•	နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။ •	ဆက်ဆံပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
•	နေ့စဉ်ပစ္စည်း အတင်/အချ ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။ •	ဆက်ဆံပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
69 Days, Full time , 800 000 Ks, Investment
•	English (4 skill), Computer (Excel, Word, Powerpoint) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ပေးအပ်သောတာဝန်ကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်
89 Days, Full time , Investment
•	ကျန်မာရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ ဦးစားပေးမည်။ •	ဒဂုံနို့ချက်စက်ရုံ ပျဉ်းမပင်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။
98 Days, Full time , Investment
•	PE လက်မှတ်ရရှိရမည်။ •	နယ်ဆိုဒ်များသို့ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရန် သွားရောက်နိုင်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရိုးသားကြိုးစားပြီး အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားပါသူဖြစ်ရမည်။
137 Days, Full time , Investment
•	ရန်ကုန်မြို့တွင်းလမ်းကြောင်းများကို သေချာသိရှိရမည်။ •	နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။
186 Days, Full time , Investment
214 Days, Full time , Investment
Junior Sales & Marketing Executive Sales & Marketing jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Myanmar ComBiz Group Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Junior Sales & Marketing Executive Jobs in Myanmar, jobs in Yangon